Wararka - Waa maxay Furfural?
Furfural waa kiimiko laga sameeyay maadada dabiiciga oo caadi ahaan loo soo saaro ujeedooyin warshadeed. Waxay asal ahaan ka kooban tahay wax soo saarka beeraha sida qolofta oat, buunshaha, galleyda, iyo balka. Qaar ka mid ah alaabada loo isticmaalo waxaa ka mid ah dilaaga doogga, fungicide, iyo dareeraha. Sidoo kale waa cunsur caan ku ah soo saarista shidaalka gaadiidka iyo habka lagu sifeynayo saliidaha saliidda. Kiimikadu waa cunsur soo saarista dhowr wakiil oo kale oo warshadeed ah sidoo kale.
urfural waa kiimiko laga sameeyay maadada dabiiciga oo caadi ahaan loo soo saaro ujeedooyin warshadeed.
Marka waxsoosaarka badan lasoo saaro, kiimikada waxaa lagu sameeyaa iyadoo la gelinayo pentosan polysaccharides iyada oo loo marayo habka acid hydrolysis, taasoo la micno ah in cellulose iyo istaatiijka walxaha aasaasiga ah loo beddelo sonkor iyadoo la isticmaalayo asiidh. Weelka hawo-qaadka ah, dhogorta jilicsan waa mid muuqaal, midab la'aan, iyo saliid leh, waxayna leedahay ur u eg yicib u eg. Soo-gaadhista hawadu waxay midabayn kartaa dheecaanka hooska hurdi ilaa bunni.
Furfural waa xoogaa biyo ku milma oo gebi ahaanba ku milma ether iyo ethanol. Isticmaalkiisa ka sokow kiimiko keli ah, waxaa loo isticmaalaa soo saarista kiimikooyinka sida furan, furfuyl, nitrofurans, iyo methylfuran. Kiimikooyinkan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa soosaarka dheeraadka ah ee alaabada, oo ay kujiraan kiimikooyinka beeraha, dawooyinka, iyo xasiliyayaasha.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aadanuhu ula xiriiro furfural. Marka lagu daro soo-gaadhista kiimikada inta lagu jiro hawsha, waxaa si dabiici ah looga heli karaa dhowr nooc oo cunto ah. Soo-gaadhista iftiinka dabeecaddan lama caddeyn inay waxyeello leedahay.
Soo-gaadhista culus ee dhogorta ayaa noqon karta mid sun ah. Tijaabooyinka shaybaarka ee dadka iyo xoolaha, furfural waxaa lagu ogaaday inuu yahay cuncun maqaarka, xuubabka xuubka, iyo indhaha. Waxa kale oo la sheegay inay sababtay raaxo-darrada cunaha iyo mareenka neefta. Qaar ka mid ah saameynta muddada-gaaban ee soo-gaadhista kiimikada meelaha hawo-xumadu ka jirto waxaa ka mid ah neefsashada oo dhib ah, carrab-qabu, iyo dhadhamin la'aanta. Saamaynta muddada dheer ee noocan ah soo-gaadhista waxay u dhexeeysaa xaaladaha maqaarka sida cambaar iyo sawir qaadashada dhibaatooyinka aragga iyo barar sambabka.
Furfural markii ugu horreysay waxaa si ballaaran loo adeegsaday 1922 markii shirkadda Quaker Oats ay bilaabeen inay ku soo saaraan qoryo boorash leh. Oats waxay sii ahaaneysaa inay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee loo sameeyo kiimikada. Intaas ka hor, waxaa si joogto ah loogu isticmaali jiray noocyada cadarka qaarkood. Waxaa markii ugu horaysay la soo saaray 1832 Johann Wolfgang Döbereiner, oo ah khabiir farmashiye Jarmal ah oo isticmaalaya bakhtiga qudhaanjada si uu u abuuro aashito formic, taas oo furfural ka ahaa wax soo saar. Qudhaanjada waxaa la rumeysan yahay inay wax ku ool u aheyd sameynta kiimikada maxaa yeelay jirkooda waxaa ku jira nooca walxaha dhirta ee hadda loo isticmaalo soo saarista.